Sambo SIKA rendrika teto Mahajanga: Miandry loza mitranga vao mitsikafona ny tsy fanarahan-dalàna
mardi, 15 mai 2018 14:03
Sambo iray mitondra ny anarana SIKA, izay mpitatitra mampitohy an’i Mahajanga sy nosy Comores no rendrika raha mbola tsy niainga akory ny seranantsambon’i Mahajanga. Entana hatrany amin’ny 350 taonina sy olona 70 no efa tafiditra tao anatiny tamin'izany.
Tsy nisy ny aina nafoy fa simba avokoa ny entana tao anatiny ankoatra ny hazo izay nokasaina haondrana.
Betsaka ihany koa ny entana very nangalarin’ireo mpanararaotra izay nandeha lakana sy vedety mihitsy nanao latsak’alina nangalatra izay azo noraofina rehetra, hatramin’ireo entana izay tsy mbola azon’ny rano aza, ankoatra ireo efa lasan’ny ranomasina.
Antony roa no voalaza fa nahatonga ny loza, dia ny tsy fanajana ny fetran’ny lanja izay tokony entin’ilay sambo, efa niohatra ny ara-dalana. Eo ihany koa ny tsy fanajana ny lera tokony niaingana tamin’ny roa ora tolakandro, efa nidina ny rano tamin’ny dimy ora vao niainga hany ka nahazo fotaka.
Zary fanao mahazatra ary tsy mahataitra ireo tompon’andraikitra voakasika, ny fahitana sambo na lakana mitondra entana mavesatra mihoatra ny lanja tokony ho zakany kanefa dia vitavita ho azy izany, eo ihany koa ny tsy fanajana ny ora fiaingana izay mifampiankina betsaka amin’ny toetry ny rano.
Ny fahitana ireo hazo fisaka, mahafeno kamiao 5 tao anaty sambo kanefa dia tokony voarara ny fanondranana hazo fa ny vokatra efa voarafitra ihany no ara-dalana.
Telo andro aty aorian’ny nisehoan’ny loza vao tazana manao fidinana eny an-toerana ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny mijery ny zava-misy, fihetsika izay tara loatra eny mampitaraina ireo tompon’entana.